Tora-pasika 5 mahavariana ao amin'ny Mediterane | Vaovao momba ny dia
Tora-pasika 5 mahavariana ao amin'ny Mediteraneana
Sahy isika anio miaraka amin'ny lisitra izay tsy dia sarotra loatra. Mikasika ny fikarohana ny morontsiraka dimy tsara indrindra any Mediterane, na farafaharatsiny ny mahatalanjona indrindra. Fantatro fa maro aminareo no hanana ny safidinao ankafiziana, ary manasa anao izahay mba hampiditra azy ireo ao amin'ny faritra misy ny hevitra. Azontsika rehetra atao daholo ny mitsidika kely ireo morontsirak'i Mediterane mahaliana ireo. Maherin'ny 46.000 kilometatra ny morontsiraka sy nosy 3.300 ...
- Rabbit Beach, Lampedusa
I Lampedusa no nosy lehibe indrindra ao amin'ny nosin'i Pelagie. Na dia manakaiky an'i Tonizia aza dia an'i Italia. Nosy tena tsy mampino noho ny rano madio sy ny moron-dranomasiny. Ao aminy, ny tsara indrindra angamba dia ny Playa de los Conejos, izay natambatra vao haingana ho morontsiraka tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny fasika fotsy sy rano kristaly, ho an'ireo izay tsy mahalala azy ary mahita azy amin'ny sary dia azo antoka fa hametraka azy io any amin'ny zoro paradisa any Karaiba. Toerana mahavariana.
Raha ny filazan'ny gazety Britanika Daily Telegraph sy ireo mpamaky azy dia miatrika ny iray amin'ireo morontsiraka telo tsara indrindra eto amin'ny Ranomasina Mediterane isika. Ny anarany amin'ny teny Kroaty dia midika hoe "tandroka volamena" ary eo amin'ny nosy Brac, an'ny faritra Dalmatia no misy azy. Tora-pasika tsara indrindra ho an'ny mpizaka surf, satria mitsoka matetika any ny rivotra mahery. Ireo rivotra ireo indrindra no mahatonga azy hanova ny endriny indraindray.
- Navagio Bay, Zakynthos
Ny nosy grika Zakynthos, na Zante, dia an'ny vondrona nosy Ionia. Nosy antitra iray, satria izy aza dia notononin'i Homer tao amin'ny Odyssey, ary manana an'io cove io, angamba ilay tsara indrindra, sary ary mpizaha tany indrindra amin'ny Nosy Greek. Fantatra tamin'ny anarana hoe Agios Georgios izy io, na dia navadika ho Navagio (izay midika hoe vaky sambo) taorian'ny nahavitan'ny sambo iray tamin'ny 1983 nitondra sigara an-tsokosoko.
- Ses Illetes beach, Formentera
Ny morontsiraka tiako indrindra any amin'ny faritr'i Mediterane Espaniôla ary ny tsara indrindra any amin'ny nosin'i Balear. Fasika fotsy, rano mangarahara amin'ny kristaly, morontsiraka virjiny ahafahanao miala sasatra sy misaintsaina ny fahitana tena mahavariana. Manoro hevitra anao aho hankafy ny filentehan'ny masoandro, zoro bohemia izay aorian'izany dia misy tehaka aza avy amin'ny vahoaka. Azonao an-tsaina sahady ny seho mivoaka novokarina mba hanombohana toy izao ny olona ...
Ho ahy ny morontsiraka tsara indrindra any amin'ny Algarve Portiogey. Fasika volamena telo kilaometatra izy ireo, miaraka ambadiky ny hantsam-bato mena midadasika ary voahodidin'ny ala maitso mandehandeha. Tsy isalasalana fa toerana mety indrindra hanaovana fialan-tsasatra mahafinaritra ho an'ny fianakaviana mahafinaritra izany. Satria morontsiraka tokoa no azonao andehanana miaraka amin'ny ankizy. Iray amin'ireo fa rehefa miditra ny ranomasina dia tsy manarona anao haingana.
Fanazavana fanampiny - Ny Nosy Greek
Sary - Swide
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Tora-pasika 5 mahavariana ao amin'ny Mediteraneana
Inona avy ireo morontsiraka tsara indrindra any Taiwan?